Nihaona mivantana tamin’ny Filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina ireo ben’ny tanàna manodidina ny 100 avy amin’ny Faritra Vakinankaratra, ny sabotsy 10 febroary teo, teny amin’ny Lapam-panjakana Iavoloha. Tamin’izany indrindra no nitondran’ireo ben’ny tanàna ny hetahetany amin’ny fampandrosoana. …Tohiny
Nisehoana fahavakisana indray teny amin’ny fonjan’Antanimora ny alin’ny sabotsy lasa teo , tokony ho tamin’ny 12 ora sy sasany tany ho any ka gadra telo no indray tafaporitsaka. Rafalimanana Nirina Dominique, izay efa voafonja tamin’ny …Tohiny
Kolonely Ratsimandrava : Feno 43 taona no namonoana azy
Feno 43 taona omaly 11 febroary 2018 no namonoana ny kolonely Richard Ratsimandrava sy ireo zandary namoy ny ainy nandritra ny iraka nampanaovina azy ireo. Nisy noho izany ny fahatsiarovana sy ny fanateram-boninkazo teny Ambohijatovo, …Tohiny
Maro amin’ireo Malagasy no efa liana mitsabo tena sy mampiasa ny vokatra tsy ahitana fangarony, fa kosa ara-boajanahary tanteraka, toa izany koa ireo mpitsabo ankehitriny no mandrisika ny marary hanaraka izany fitsaboana bio izany. Ny …Tohiny